वामदेवलाई हराइदिने, मुकुन्द घिमिरेको उम्मेद्बारी घोषणा ! तपाइको भोट कस्लाइ ? – onlinedarpan:
Posted on October 10, 2018 October 13, 2018 Author onlinedarpanComment(0) 173 Views
काठमाडौंको क्षेत्र नं ७ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रामवीर मानन्धरले आफ्नै पार्टीका नेता वामदेव गौतमको लागि भनेर सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन्। मङ्गलबारनै उनले पार्टी सचिवालयमा राजीनामा बुझाएपछि नेता गौतम सांसदको उम्मेदवार बन्ने विषयले निकै चर्चा पाएको छ। गत वर्ष सम्पन्न आम निर्वाचनमा बर्दिया १ बाट पराजित भएका गौतमलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउनकै लागि मानन्धरलाई राजीनामा दिन किन लगाइयो यो रहस्यमय विषय छ ।
सामाजिक सञ्जालदेखि चियापसलमा समेत वामदेवलाई उम्मेद्वार बनाउनकै लागि मानन्धरलाई राजीनामा गराउन लागेको भन्दै आलोचना भएको छ। कतिपय प्रयोगकर्ताले लेखेका छन् , ‘जनमतको कदर हुन्थ्यो भने किन वामदेवलाई बनाइनुपर्ने’। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाएका मुकुन्द घिमिरेले त झन् गहिरो व्यङ्ग गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेका छन्। राजनीतिमा जे पनि हुन्छ भन्ने सन्दर्भले लाई उनले इंगित गर्न खोजेका छन्।
काठमाडौँ । काठमाडौंको क्षेत्र नं ७ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रामवीर मानन्धरले आफ्नै पार्टीका नेता वामदेव गौतमको लागि भनेर सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन्। मङ्गलबारनै उनले पार्टी सचिवालयमा राजीनामा बुझाएपछि नेता गौतम सांसदको उम्मेदवार बन्ने विषयले निकै चर्चा पाएको छ। गत वर्ष सम्पन्न आम निर्वाचनमा बर्दिया १ बाट पराजित भएका गौतमलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउनकै लागि मानन्धरलाई राजीनामा दिन किन लगाइयो यो रहस्यमय विषय छ। मन्त्री र सकेसम्म प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि मानन्धरलाई राजिनामा गराएर गौतमलाई उम्मेद्वार बनाइएको जानकारहरू बताउँछन्।
नेकपाका नेता गौतम गत निर्वाचनमा बर्दिया १ बाट काङ्ग्रेसका सञ्जयकुमार गौतमसँग ७५३ मतले पराजित भएका थिए। सामाजिक सञ्जालदेखि चियापसलमा समेत वामदेवलाई उम्मेद्वार बनाउनकै लागि मानन्धरलाई राजीनामा गराउन लागेको भन्दै आलोचना भएको छ। कतिपय प्रयोगकर्ताले लेखेका छन् , ‘जनमतको कदर हुन्थ्यो भने किन वामदेवलाई बनाइनुपर्ने’। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाएका मुकुन्द घिमिरेले त झन् गहिरो व्यङ्ग गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेका छन्। राजनीतिमा जे पनि हुन्छ भन्ने सन्दर्भले लाई उनले इंगित गर्न खोजेका छन्।
ShareTweetPin7sharesनेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र आन्तरिक एकतालाई लिएर विवाद चुलिरहेका बेला नेता वामदेव गौतमलाई उपनिर्वाचन लड्ने विषयले झनै विवाद बढाएको छ । नेकपाले बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा चुनावमा पराजित नेता गौतमलाई काठमाडौं ७ बाट निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गराएर संसदमा लैजाने प्रक्रिया सुरु गरेपछि यसले विवाद भने चर्काएको हो । मंगलबार नेकपाका सांसद रामवीर मानन्धरले विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
ShareTweetPin0sharesभरतपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वभरि नै अहिले कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक भइरहेको अवस्थामा नेपालमा भने दुई ठूला कम्युनिष्टहरु एक भई दुई तिहाइको सरकार बन्नु ऐतिहासिक परिघटना भएको बताएका छन् । नेकपा चितवनले आइतबार भरतपुरमा आयोजना गरेको चाडपर्व शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालमा कम्युनिष्टहरु बलियो विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…